Ninka ugu taajirsan dunida oo sheegay inuu "iskaabulo" noqonayo - BBC News Somali
Ninka ugu taajirsan dunida oo sheegay inuu "iskaabulo" noqonayo
Image caption Jeff Bezos waxaa loo aqoonsaday qofka ugu taajirsan guud ahaan dunida
"Ka dib wakhti dheer oo ay naga dhex jirtay isfaham darro, isla markaana aan marar badan isku daynay inaan kala tagno, waxaan hadda go'aansannay inaan is furno, nolosheennana aan sii wadanno annagoo saaxiibo ah", ayey lamaanaha ku yiraahdeen bayaankooda.
"Waxaan dareemeynaa inaan aad u nasiib badan nahay maadaama aan is helnay, waxaana ku faraxsan nahay inaan lamaane ahayn sannad kasta oo ka mid ah muddadaas ka soo wareegtay xilligii aan isguursannay", ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay lamaanahan maalqabeennada ah.
Waxaa sidoo kale lagu daray: "Haddii aan ogaan lahayn inaan kala tagi doonno 25 sano ka dib, guurkeenna oo dhan waan soo billaabi lahayn mar kale. Waxaan isla soo wadaagnay nolol aad u qurux badan waxaana hadda aragnaa inuu naga horreeyo mustaqbal wanaagsan, waalid ahaan, saaxiib ahaan iyo iskaashato ahaanba".
Sannadkii la soo dhaafay waxay lamaanahan si wada jir ah u fulinayeen mashruuc loogu tala galay in lagu caawiyo dadka hoy la'aanta ah iyo in lagu dhiso iskuullo ay dhigtaan carruurta ka soo jeeda qoysaska saboolka ah.
Image caption Lamaanahan ayaa is guursaday sannadkii 1993-kii
Waxaa la isla dhex marayay in Ms Sánchez ay "is arkayeen" Mr Bezos ilaa dabayaaqada sannadkii lasoo dhaafay.
1 sano ka dib xilligaas ayuu Jeff aasaasay shirkadda Amazon - taasoo ku billaabatay shirkad buugaagta ku iibisa dhinaca internet-ka.
Waxay sare u kacday 3.4% waxayna dhaqaale ahaan kor u dhaaftay shirkadda Microsoft, oo uu qiimaheedu ahaa $789bn.